Caalamka Online » Daaawo Sawirada Dalka Zembwawe oo maanta laga cabsi qabo in uu ka dhaco Afgambi iyo ciidanka oo huubka la soo baxay
Daaawo Sawirada Dalka Zembwawe oo maanta laga cabsi qabo in uu ka dhaco Afgambi iyo ciidanka oo huubka la soo baxay
November 15, 2017 - Written by Khaliif - Edited byKhaliif
waxaa Maanta qasan xaadal dalka Zimbabwe kadib markii Ciidamada Milatariga dalkaas ay kasoo baxeen xeryahooda laguna arkayo meelo badan ay kamid ah magaalada caasimada ah ee Harare.
Askarta ayaa gaadiidka Dagaalka oo ay ka mid yihiin Taangiyo kuwaaas oo lagu jaray qaar kamid ah Wadooyinka magaalada Haraare, waxaa sidoo kale magaalada laga maqlayaa qaraxyo iyo rasaas ay ciidamada ridayaan.
Waxaa jirta cabsi xogan oo laga qabo in Ciidamada Milatariga ay Afganbiyaan Dowlada uu Hogaamiyo roperto Mugabe, kadib markii uu khilaaf xoogan soo kala dhax galay Hogaanka Xisbiga talada dalkaasi haya.
Qoraal kasoo baxay Xisbiga haya ee Zanu-Pf ayaa lagu dhaleeceeyay Taliyaha ugu sareeya Milatariga dalka Zimbabwe oo masuul ka ah xaalada kacsan ee hada ka taagan dalkaasi.
Taliyaha ciidanka Zimbabwe Gen. Constantino Chiwenga ayaa waxa uu shalay ka digay inuu diyaar u yahay inuu faragelin sameeyo kaddib markii Mr Mugabe uu todobaadkii tegay xilka ka qaaday ku-xigeenkiisii.
Waxaa soo baxayaa astaamo muujinaya in ay kala qeybsanaan u dhaxeyso Mugabe iyo milateriga kaddib markii uu madaxweynuhu todobaadkii hore xilka ka qaaday ku-xigeenkiisii, Emmerson Mnangagwa, waxa uuna Madaxweynaha rabaa in xaaskiisa xilka ka bedesho.